लकडाउनमा बस्दा मोबाइलको डाटा कम भयो ? यी उपाय अपनाएर धेरै समय इन्टरनेट चलाउनुस् - Technology Khabar
» लकडाउनमा बस्दा मोबाइलको डाटा कम भयो ? यी उपाय अपनाएर धेरै समय इन्टरनेट चलाउनुस्
कोभिड-१९ को संक्रमणबाट बच्न लकडाउन अवधिभर सबै दिन घरमा बस्नु दिक्क लाग्दो अवस्था हो । यो बेलामा इन्टरनेट मात्र माध्यम हो जसले तपाईंलाई सबैभन्दा धेरै सहयोग गर्दछ।
इन्टरनेटको कारण मान्छेहरुकाे समय व्यतित भईरहेको छ। तर यहाँ धेरै प्रयोगकर्ताहरू छन् जसको इन्टर्नेट डाटा रात हुनुभन्दा अगाडी नै समाप्त हुन्छ।
यद्यपि केही कम्पनीहरूले उनीहरूको योजनामा ​​एफयूपी लिमिट पनि दिइरहेका हुन्छन्, तर त्यसमा डाटा गति पनि घटाइएको हुन्छ। यस समस्यालाई बुझ्दै, आज हामी तपाईँलाई केहि त्यस्ता सुझावहरू र जुक्तिहरू बताउँदैछौ, जसको अनुसरण गरेर तपाईँ आफ्नो इन्टर्नेट खपत कम गर्न सक्नुहुनेछ र डाटालाई लामो समयसम्म चलाउन सक्नुहुन्छ।
अटो सिंक बन्द गर्नुस
जब तपाईं नयाँ स्मार्टफोन लिनुहुन्छ, यो गूगल खाताकासाथ लग इन हुन्छ। फोनमा मेल आईडीमार्फत मात्रै सेटअप गरिएको हुन्छ र एप स्टोर सक्रिय हुन्छ। प्रायः व्यक्ति गूगल खाता सेटअपपछि मेलको अटो सिंक अन गर्दछ। अटो सिंक अनले गर्दा तपाईँको ईमेल खातामा जब कुनै नयाँ मेल आउँछ त्यसमा नोटिफिकेसन कारण आउँदछ।
यदि तपाई धेरै मेल प्रयोग गर्नुहुन्न भने पनि पृष्ठभूमिमा मेल इन्टरनेटमा जोडिईरहन्छ र निरन्तर अटो सिंक अन भईरहेको हुन्छ। अटो सिंक अनले गर्दा फोनको इन्टरनेट डाटा लगातार प्रयोग भईरहेको हुन्छ तर त्यसमा तपाईँले ध्यान दिनु हुन्छ ।त्यसैले अटो सिंक अन बन्द गर्नाले डाटा खपत कम हुनेछ।
भाइबर/व्हाट्सएपमा मिडिया अटो डाउनलोड बन्द
देशमा भाइबर/व्हाट्सएप लगायत सबैभन्दा बढी प्रयोग भईरहेको छ। यी मेसेजिङ्ग एप्स घरका प्रत्येक सदस्यको फोनमा डाउनलोड गरिएको छ। यसमा यति धेरै समूहहरू गठन भएका हुन्छन् कि फोनमा नोटिफिकेसन अलर्ट सँधै बज्छ। अक्सर व्यक्तिहरू भाइबर/व्हाट्सएपलगायतका मेसेजिङ्ग एप्समा मिडिया अटो डाउनलोड राख्छन्। यस कारणले कुनै पनि नयाँ तस्वीर वा भिडियो फाइल रिसिभ हुन्छ । यी फाइलहरु स्वचालित रूपमा डाउनलोड हुन्छन् र फोन ग्यालरीमा सेभ हुन्छ। केहि फाईलहरू साना साइजका हुन्छन र केहि ठूला आकारका हुन्छन्।
आजकल कोरोनाको सन्देश अन्धाधुन्ध आईरहेका छन् र ती डाउनलोड भएपछि डाटाको खपत पनि हुने गर्दछ। यस्तो अवस्थामा, यदि तपाईँले भाइबर व्हाट्सएप लगायतका एप्समा मिडिया अटो डाउनलोडलाई रोक्नुभयो भने तपाईँको इन्टरनेट डाटा बचत हुनेछ।
एप बन्द गर्नुहोस्
यदि तपाईं फोनमा गेमहरू खेलिरहनु भएको छ र त्यसबेला यदि कुनै काम आयो भने होम बटन थिचेर वा फोन लक गरेर तपाईं आफ्नो काममा लाग्नुहुनेछ। इन्टरनेट सर्फिंग गरेपछि, सामाजिक मीडिया एप्स वा क्यामरा प्रयोग गरिसकेपछि धेरै व्यक्तिले होम बटन थिचेर त्यसलाई बन्द गरेको भन्छन्।
तर यो स्पष्ट हुनुहोस् की होम बटन थिचेर यी कार्यहरू पूर्ण रूपमा बन्द हुँदैनन्, र ब्याकग्राउण्डमा सक्रिय रहन्छन् र लगातार ब्याट्री प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा कुनै पनि एप वा फीचर प्रयोग गरे पछि तिनीहरूलाई बन्द गर्नुहोस्।
डाटा सेभर मोड
डाटा सेभर मोड अहिलेका लगभग सबै ब्रान्डका स्मार्टफोनहरुमा अप्शनको रुपमा रहेका हुन्छन्। यो सुविधा फोनमा विशेष रूपमा सम्मिलित गरिएको हुन्छ ता कि फोनमा अवस्थित एप्सद्वारा डाटा खपतलाई सिमित गर्न सकियोस्। यो मोड खोलेर प्रयोगकर्ताहरूले फोनमा राखिएका एपले गर्ने इन्टरनेटको उपयोग कम गर्न सक्दछन्। केही स्मार्टफोनहरूमा ‘लिमिट ब्याकग्राउण्ड डाटा यूज’ को अप्शन पनि फेला पार्न सकिन्छ। यसलाई खोल्दा, एप्सद्वारा प्रयोग गरिएको इन्टरनेट डाटालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
मोबाइलमा पबजी गेम खेल्दै नेपाली यूजर । फाइल
लोकेसन सर्भिस रोक्नुहोस्
जब फोनमा नयाँ एप इन्स्टल हुन्छ, तिनीहरूलाई लोकेसन एक्सेस पनि दिइन्छ। त्यस्ता धेरै एप्स स्मार्टफोनमा पहिले नै उपल्बध छन्, जसले सो लोकेसन एक्सेस सँधै प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। यी एप्स निरन्तर लोकेसन सर्भिसमा कनेक्ट हुन्छन र यसै कारणले इन्टरनेट पनि निरन्तर प्रयोग भईरहेको हुन्छ। जुन एप्स प्रयोगमा छैन त्यसको लोकेसन एक्सेस सर्भिस बन्द गर्नुस र यदि लोकेसन सर्भिस आवश्यक नै छैन भने त्यसलाई आफैं रोक्नुहोस्। जसले गर्दा तपाईँको इन्टर्नेट डाटा खपत ठूलो हदसम्म रोकिनेछ।
अनलाइन कन्टेन्ट लो क्वालिटीमा प्रयोग
पहिले पहिले फोन मेमोरीमा सयौं गीतहरू संगीत सुन्नको लागि सेभ गर्ने गरिएको थियो। तर आजकल युट्यूबमा नै कुनै पनि गीत सुन्न वा भिडियो हेर्नका लागि सिधै प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यदि तपाईं अडियो मात्र सुन्न चाहनुहुन्छ भने युट्यूबमा न्यूनतम रिजोलुसनमा भिडियो गुणस्तर घटाउनुस्। त्यस्तै, यदि तपाइँ कुनै अडियो स्ट्रिमिङ्ग एप प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईँले दैनिकरुपमा सुन्ने वा मनपर्ने ट्र्याक तथा गीतहरुलाई अफलाइन ग्यालरीमा सेभ गर्न प्रयास गर्नुहोस्। यसले इन्टरनेट डाटा खपत कम गर्दछ।
यदि तपाईं आफ्नो फोनमा यस्तो खेल खेल्दै हुनुहुन्छ जुन अनलाइन नेटवर्कमा चल्दैन वा तपाईँ फोनमा डाउनलोड गरिएको भिडियो हेरिरहनु भएको छ र यदि त्यसबेला जरुरी कल वा सन्देश आवश्यक छैन भने, तपाईँले आफ्नो फोनलाई फ्लाइट मोडमा राख्न सक्नुहुन्छ। यस अवस्थामा जीपीएसमा खर्च हुने इन्टरनेट डाटा पनि बचत हुनेछ।
यसका साथै फ्लाइट मोडमा फोन राख्दा फोनको ब्याट्री पनि लामो अबधिसम्म चार्ज गरे पुग्छ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत ठगी: ६० हजार डलरको चिठ्ठा परेको लोभमा साढे सात लाख गुम्यो
ह्वावे पी३० सिरिज नेपालमा सार्वजनिक, ट्रिपल क्यामरा र ४२०० एमएएच ब्याट्री
फेसबुकले ल्यायो नयाँ मेसेजिङ्ग एप, केबल दुईजनाले एकआपसमा आफ्ना भावनाहरु साटासाट गर्नसक्ने
सामसंग ग्यालेक्सी सी १० स्मार्टफोनमा ड्यूल रियर क्यामरा
टिकटकमा अब तीन मिनेट लामो भिडियो बनाउन पाईने, हाल परीक्षणको चरणमा